के तपाईंलाई नशा च्यापिने समस्या छ ? यसरी गर्नुस् प्राकृतिक उपचार | Hamro Doctor News
हिजोआज कम्मरको नशा च्यापिएकोे समस्याको बारेमा धेरै सुन्ने गरिन्छ । अस्पतालहरुमा यस्ता बिरामिको संख्या बढिरहेको तथ्याङ्क छ । नशा च्यापिने बित्तिकै अधिकांशको दिमागमा जीवन बर्बाद भयो वा अप्रेशन नै गर्नु पर्ने भयो भन्ने जस्ता भयले धेरै मानिसहरु भयभित छन् । तर, नशा च्यापिएको अवस्थामा अप्रेशन बाहेक पनि अन्य प्राकृतिक उपचार विधिहरु प्रभावकारी मानिन्छ ।
कम्मरको मेरुदण्डमा ५ वटा लम्बर र ४ वटा स्याक्रल गरी ९ वटा टुक्रा मिलेर कम्मर बनेको हुन्छ । त्यसका वरिपरि मांशपेसी र नशा हुन्छन् । प्रत्येक मेरुदण्डको हड्डिको बीचमा डिस्क, एक तन्किने खालको तन्तुबाट बेनेको हुन्छ । डिस्कले मेरुदण्डका हड्डिहरुलाई अढ्याएर राखेको हुन्छ । कुनै कारण त्यो डिस्कले आफ्नो ठाउँ छोड्योभने त्यसले कम्मरको मेरुदण्डको भागबाट निस्कने साइटिक नशालाई च्यापिदिन्छ त्यस्तो अवस्थालाई प्रोल्याप्स इन्टर भर्टेव्रल डिस्क वा PIVD भनिन्छ । एक्ष्ख्म् नै नशा च्यापिने प्रमुख कारण हो । नशा च्यापिएको पत्ता लगाउनको लागि एमआरआई नै गर्नु पर्ने हुन्छ । त्यसपछि मात्र प्राकृतिक उपचार सुरु गर्नुपर्छ ।
Last modified on 2020-01-13 12:02:33
प्राथमिक उपचारका लागि के के कुरामा ध्यान दिने ?
बेसार सेवन गर्दा जान्नैपर्ने मुख्य कुरा
नवजात शिशुमा देखिने खतरा र स्याहार गर्ने तरिका